Ebusika, amasosha omzimba ikakhulukazi abadinga ukunakekelwa. isiqinisekiso impilo - ekudleni esifanele.
1. Amaphrotheni. On ukuthi kukhona ukudla okwanele imenyu amaprotheni incike ukuthuthukiswa omzimba emzimbeni. Kuyinto lwamasosha omzimba oluvame ukuba aqaphele amagciwane ubuthi ezithile, antigen yezinye imisuka bababhubhise. Ukuze synthesize a immunoglobulin, ayisiza ephelele, kumelwe kube khona amaprotheni ukudla equkethe ama-amino acid leucine, tryptophan, isoleucine, valine, threonine, methionine, lysine, phenylalanine. Ngakho-ke, ukuze amasosha omzimba womuntu uhlala ezingeni elifanele, ukudla Kunconywa ukwakha nge ukusetshenziswa nsuku zonke 100 g amaprotheni.
Inyama, inhlanzi, inyama yenkukhu, amaqanda, i-cottage shizi noshizi valued deku amaprotheni isilwane. Izitshalo, imikhiqizo wokudla wempuphu, amakhowe kahle namaprotheni atholakala emifinweni.
2. Amafutha. amaseli letitsite omzimba lymphocyte futhi macrophage babe igobolondo zokuzivikela. Basuke eyakhiwa lipids, okuhlanganisa i-cholesterol. Yingakho ungeke ukwazi ukusebenzisa ephansi fat yokudla vegan ebusika. Lena indlela ngqo ekubeni buthakathaka empilweni yabo. amasosha omzimba Human kuncike emandleni kwezindonga lymphocyte futhi macrophage ushwabadela pathogenic umqali amaseli. Izazi zokudla kakhulu belulekwa zihlanganisa izitsha 10 amagremu of fat okuvela ezilwaneni, kanye 20 amagremu of fat zezitshalo, ngisho labo besifazane eduze ulandele sibalo.
Isihloko ahlukene fat. Inani Immunomodulatory itholakala okuqukethwe amanoni arachidonic acid. Kule ukudluliswa acid polyunsaturated kuncike amasosha omzimba. Ukusetshenziswa fat nenani elikhulu Imikhuba namazinga anqunyiwe Dietetics, kuyindlela ephumelelayo ukuze ukukhulisa amasosha omzimba womuntu.
3. Amakhabhohayidrethi. uketshezi Intercellular, izindlala zamanzi, umchamo, igazi, uketshezi nezindlala - yonke indawo kukhona carbohydrate. fibre Heavy normalizes zizalela imvelo nenzuzo microflora emathunjini. uketshezi eziphilayo zithutha balamuli okuzivikela. Amakhabhohayidrethi Ngakho futhi izakhi ezibalulekile ezidingekayo ukuze ukusebenza evamile izivikeli mzimba.
Uma kudliwe nsuku zonke ku-300 g imikhiqizo yezilwane - imithombo amaprotheni, 100 g okusanhlamvu 350 g kwemikhiqizo imvubelo inhlama, ngenani elithandekayo carbohydrate uyithayiphe yalezi imikhiqizo efanayo. eminye sinezela imenyu ukudla carbohydrate akudingeki, uma kuziwa ekudleni ngo-2000 kcal.
4. Indlela ukwandisa amasosha omzimba yomzimba ngosizo imifino nezithelo. Amasosha omzimba ngokuvamile asekelwe nge amavithamini kanye izakhi mkhondo. A ukudla olinganiselayo zabantu abasebenza ngokomzimba ikhalori Kunconywa cishe 6000 kcal, kukhona amavithamini anele. izinyathelo engeziwe ngoba umthamo wemvula yabo liyadingeka. In ongakhetha labesifazane amandla ukuthi ukudla kuhloswe ukubeka umkhawulo kilojoule kufanele kwetfulwe kwasekuqaleni, C imithombo yemvelo vitamin, ikakhulukazi ebusika.
amasosha omzimba womuntu ku ebusika nokhahlo, okhokho bethu wawugcinwa ezingeni eliphezulu ngosizo neklabishi yomiswa rose okhalweni. Namuhla, umthombo ethandwa ascorbic acid inombolo eyodwa kubhekwe ezisawolintshi izithelo, kanye anyanisi, ikiwi, ama-raspberry, uju.
Vitamin A no-E afakiwe eqenjini fat-encibilikayo. Ngakho-ke, izithelo nemifino, ziqukethe kumele asetshenziswe kanye uwoyela zemifino noma ukhilimu omuncu, ukuthuthukisa digestibility zomzimba. Imifino nezithelo of obomvu, osawolintshi yellow imibala yemvelo kuthatha indawo yokuqala okuqukethwe carotene. Oily inhlanzi, okusanhlamvu, isibindi, zemifino amafutha kukhona abahlinzeki vitamin E.
Kanjani ngokushesha sithathe izivikeli mzimba ngosizo bioflavonoids. Vitamin P - antioxidant enamandla ukuthi kuvusa izivikeli mzimba. Iqembu P amavithamini avame ukuba izithelo, namabala e violet shades, kuhlanganise iwayini. Ukuze phakamisa amasosha omzimba kuyadingeka ukuze ungene ekudleni aluhlaza okwesibhakabhaka, currants, amagilebhisi, izinhlobo amnyama, izitsha ezivela kubo.
Umkhosi Cologne edumile: amasiko izici